ch 16 Matthew – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaMateyu / ch 16 Matthew
16:1 Yaye beza abaFarisi nabaSadusi ukuba amvavanye, baza bamcela ukuba ababonise umqondiso ovela ezulwini.
16:2 Ke yena waphendula wathi kubo: "Kwakuhlwa ifika, uthi, 'Kuya kuba azole, kuba izulu limlilo ukuba bomvu,'
16:3 yaye kusasa, 'Namhlanje apho kuya kubakho uqhwithela, kuba izulu limlilo ukuba bomvu, lisibekele. 'Ngoko ke, uyazi indlela kugweba imbonakalo yesibhakabhaka, kodwa awukwazi ukwazi imiqondiso yamaxesha?
16:4 Sizukulwana singendawo nesikrexezayo ofuna uphawu. Ke asiyi kunikwa mqondiso, ngaphandle komqondiso umprofeti uYona. "Kwaye ebashiya ngasemva, yena wemka.
16:5 Kwaye xa abafundi bakhe, waya phesheya kolwandle, belibele ukuzisa isonka.
16:6 Wathi ke yena kubo, "Cinga nililumkele igwele labaFarisi nabaSadusi."
16:7 Kodwa bona babecinga ngaphakathi kwabo, bathi, "Útsho ngokuba anidlanga sonka bayizisa."
16:8 ke uYesu, ngokwazi oku, wathi: "Kutheni na ukuba ucinge phakathi kwenu, O encinane ukholo, ukuba kungenxa yokuba kungekho sonka?
16:13 Emva koko uYesu waya emacaleni aseKesareya yakwaFilipu. Waza wababuza abafundi bakhe, bathi, "Amadoda athi uNyana woMntu Ngubani na?"
16:14 Bathi, "Bambi bathi nguYohane umBhaptizi, nabanye bathi uEliya, ukanti abanye bathi nguYeremiya okanye ngomnye wabaprofeti. "
16:15 UYesu wathi kubo, "Ke nina nithi ndingubani na?"
16:16 USimon Petros waphendula wathi, "Wena unguye uKristu, uNyana woThixo ophilayo. "
16:17 Kwaye ephendula, UYesu wathi kuye: "Ninoyolo nina, Simon nyana kaYona. Ngokuba akukutyhilelwanga oku yinyama negazi, ukutyhilelwe oku kuwe, kodwa nguBawo, osezulwini.
16:18 Ke mna ndithi kuni, ukuba uPeter, kwaye phezu kolu lwalwa ndiya kulakhela iBandla lam, namasango elabafileyo akayi kuloyisa.
16:19 Ndiya kukunika izitshixo zobukumkani bamazulu. Kwaye nantoni na okubopha emhlabeni iya kubotshwa, nditsho ezulwini. Kwaye nantoni na ndinikhululele emhlabeni iya kukhululwa, nditsho ezulwini. "
16:20 Wabayala ke abafundi bakhe ukuba bangaxeleli bani ukuba yena unguYesu uKristu.
16:21 Ukususela ngelo xesha, UYesu waqala ukutyhila abafundi bakhe ukuba kwakuyimfuneko ukuba aye eYerusalem, kwaye ubunzima obukhulu kuwo amadoda amakhulu nababhali, iinkokheli zababingeleli, kwaye ukuba abulawe, aze avuke ngomhla wesithathu.
16:22 ke uPetros, ukuthatha eceleni, waqala ukuyidubula kuye, bathi, "Nkosi, kwakhwelela kude kuwe; oko akuyi kukha kubekho kuwe. "
16:23 , Obalekela, UYesu wathi kuPetros: "Suka uye emva kwam, uSathana; wena isikhubekiso kum. Ngokuba akukho beziphethe ngokoko ungokaThixo, kodwa yintoni na babantu. "
16:24 Wandula ke uYesu wathi kubafundi bakhe: "Ukuba nabani na ufuna ukundilandela, makazincame ngokwakhe, awuthwale umnqamlezo wakhe, andilandele.
16:25 Kuba othe wafuna ukusindisa ubomi bakhe, uya kulahlekelwa nguwo. Osukuba ke eya kuba uwulahlileyo umphefumlo wakhe ngenxa yam,, uya kuwufumana.
16:26 Kuba Kuyinzuzo njani indoda, ukuba uthe wazuza ihlabathi liphela, kodwa ubunzima ngokwenene umonakalo emphefumlweni wakhe? Okanye worhola ntoni na umntu, ibe sisananelo somphefumlo wakhe?
16:27 Kuba uNyana womntu uza kufika esebuqaqawulini boYise, neengelosi zakhe. Kwaye yena ke uya kubuyekeza elowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe.
16:28 Inene, ndithi kuni, kukho abathile phakathi kwabo bemi apha, abangayi kukha beve kufa, bade bambone uNyana woMntu efika engukumkani. "